November 29, 2019 - ThutaSone
ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ“ကုသိုလ်နဲ့ နိုးထဖို့ အကျင့်လုပ်ပေးပါ”
November 29, 2019 ThutaSone 0
လောကကြီးမှာ ဘုရားပွင့်ဖို့ရယ် ကိုယ့်စိတ်မှာ ဘုရားပွင့်ဖို့ရယ် ဘယ်ဟာလွယ်သလဲ.. မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ လူက အိပ်နေရာက မလှုပ်နဲ့ဦးတော့ စိတ်ကလေး နိုးလိုက်တာနဲ့ “နမောတဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသဗ္ဗုဒ္ဓဿ” လို့ဘုန်းဘုန်းက အမြဲရွတ်လေ့ရှိသလိုမိုးလင်းတာနဲ့ ရွတ်တယ်.. ရှည်လို့ ၃-ခေါက် မရွတ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင် ၁-ခေါက်တော့ ရွတ်ပါ..၁-ခေါက်ရွတ်ဖို့တောင်ရှည်နေသေးတယ်ဆိုရင် “သောဘဂဝါ ဣတိပိ […]
ကင်ဆာနှင့် သွေးတိုးရောဂါကို ဟန့်တားနိုင်တဲ့..ချဉ်ပေါင်ဖူး၏ ကျန်းမာရေးအတွက် အံ့ဖွယ်များ
ချဉ်ပေါင်ဖူး၏ အကျိုးကျေးဇူးများ ကင်ဆာနှင့် သွေးတိုးရောဂါကို ဟန့်တားနိုင်ခြင်း – လေ့လာမှု တစ်ရပ်အရ ချဉ်ပေါင်ဖူးဟာ သွေးတိုးတာကို လျော့ကျစေနိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ချဉ်ပေါင်ဖူးဟာ သွေးကြောတွေကို ကျယ်စေပြီး သွေးစေးပျစ်မှု လျော့ကျစေကာ ဆီးသွားများစေတဲ့ အစွမ်းရှိလို့ပါ။ တခြားလေ့လာမှု တစ်ရပ်အရ ချဉ်ပေါင်ဖူးမှာပါတဲ့ အန်သိုဆိုင်ယာနင်က ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို သေစေနိုင်တာကြောင့် […]
နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေက သင့်ကို စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်မယ့်အချက် (၅) ချက် တစ်ချို့လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ မွေးရာပါကံလို့ပဲပြောရမလား၊ ထူးခြားချက်လို့ပဲပြောရမလား (အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်) နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရဲ့ စောင့်ရှောက်ခြင်းကို အမြဲတမ်းခံရပါတယ်။ သင့်ကိုနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေက စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်မယ့်အချက် (၅) ချက်ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီအရာလေးတွေကို သင်အမြဲလိုလို ကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ မမြင်ရတဲ့ […]
ကိုထင်လင်းအောင်ရဲ့စိတ်ထားလေးကလှလိုက်တာ စိတ်ထဲအမြဲကိုယ်ချင်းစာတဲ့စိတ်ထားတတ်လိုက်တာ ဒီလိုလူတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြလိုက်တာ အရမ်းကျေနပ်ဖို့ကောင်းတယ် ရာထူးနဲ့ အစစအရာရာ တိုးတက်အောင်မြင်ပါစေ သိပ်ပြီးအားကျတယ် သိပ်ပြီးပျော်မိတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှ တကယ်ပေါ်ပြရမဲ့ကြင်နာမူတွေ တကယ်အကာင်အတည်ဖော်နိုင်ကြပါစေ အရမ်းလေးစာမိတယ် video credit – Htin Lin Aung Unicode ကိုထငျလငျးအောငျရဲ့စိတျထားလေးကလှလိုကျတာ စိတျထဲအမွဲကိုယျခငျြးစာတဲ့စိတျထားတတျလိုကျတာ ဒီလိုလူတှရှေိတယျဆိုတာကိုသကျသပွေလိုကျတာ အရမျးကနြေပျဖို့ကောငျးတယျ ရာထူးနဲ့ […]
ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်နဲ့ တီမောအသင်းကို ထပ်အနိုင်ယူတဲ့ မြန်မာယူ၂၂ အသင်း
အကြိမ်(၃၀)မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ အမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲရဲ့ အုပ်စုတတိယပွဲစဉ်အဖြစ် အိမ်ရှင် တီမော နဲ့ မြန်မာယူ-၂၂ အသင်းတို့ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ရာ မြန်မာယူ-၂၂ အသင်းက (၃-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ မြန်မာအသင်း နိုင်ပွဲ မဖြစ်မနေရယူဖို့ လိုအပ်တဲ့အတိုင်း အနိုင်ရလဒ်ရယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့် နောက်တန်းနှင့် ဂိုးသမားတို့အကြား လိုအပ်ချက်များစွာ၊ အမှားပေါင်းများစွာရှိနေတာကိုတော့ တွေ့ရပါတယ်။ (၁၅)မိနစ်နောက်ပိုင်းမှသာ […]
လူရွှင်တော် ဦးစပ်စုရဲ့ သမီးလေး ပျောက်ဆုံးနေတာပါ ဝေမျှကူညီပေးကြပါဦးဗျာ
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့။မြို့မအမှတ် ( ၁၀)ရပ်ကွက်။ ၉/ ကပတနိုင် ၂၆၆၈၃၀..ကိုင်ဆောင်သောမ ချိုဇင်သွယ်(ခ)မမေကမ္ဘာခင်သည်..၂၇..၁၁.၂၀၁၉.. .နံက် ၉. နာရီခန့်ကဈေးဝယ်သွားရင်းပြန်မလာပါ။ပါသွားသောဖုန်းများကိုဆက်ရာတွင်လည်းမကိုင်ပါသြဖင့်မိဘများအရမ်းစိတ်ပူနေပါတယ်။တွေ့ရှိပါက အကြောင်းကြားပေးကြပါ။ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့။မြို့မအမှတ် ( ၁၀)ရပ်ကွက်။ ၉/ ကပတနိုင် ၂၆၆၈၃၀..ကိုင်ဆောင်သောမ ချိုဇင်သွယ်(ခ)မမေကမ္ဘာခင်သည်..၂၇..၁၁.၂၀၁၉.. .နံက် ၉. နာရီခန့်ကဈေးဝယ်သွားရင်းပြန်မလာပါ။ပါသွားသောဖုန်းများကိုဆက်ရာတွင်လည်းမကိုင်ပါသြဖင့်မိဘများအရမ်းစိတ်ပူနေပါတယ်။တွေ့ရှိပါက အကြောင်းကြားပေးကြပါ။ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့။မြို့မအမှတ် ( ၁၀)ရပ်ကွက်။ […]
မြန်မာအိုင်ဒေါ ကွင်းထဲဝင်ပြီး ကြည့်ရှုခွင့် ပိတ်ပင်ခံလိုက်ရတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်
အောက်တွင် ဗွီဒီယို တင်ထားပေးပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူအကြည့်များတဲ့ တီဗွီအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Myanmar Idol အစီအစဉ်ဟာဆိုရင် အခုချိန်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်မှာ လေးကြိမ်မြောက်ပင် တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ယနေ (၃) ကြိမ်တိုင်ပြီးမြောက်ခဲ့သော်လည်း အများပြည်သူ သတိမထားမိကြပေမယ့်ယခု(၄)ကြိမ်မြောက်မှာတော့ Voting Result တွေ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိတာ ၊ SMS Voting […]
အင်းစိန် ရွာမ အရှေ့ လမ်းသွယ် ၁၃ တွင် ကလေးသူခိုးဖမ်းမိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန် ရွာမ အရှေ့ လမ်းသွယ် ၁၃ တွင် နိုင်ဝင်ဘာလ (၂၈) ရက်နေ့တွင် ကလေးသူခိုးအား ဖမ်းဆီးမိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းပထမအရူးမကြီးလို ကလေးတွေနောက် တကောက်ကောက်လိုက်နေလို့ ကလေးတွေရော လူကြီးတွေပါ အရူးမကြီးလို့ ထင်နေကြတာ ကျောင်းဆင်းချိန်ရောက်မှ ရပ်ကွက်ထဲပြန်တဲ့ ကလေးတွေ နောက် လိုက်ပြီး […]
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး မရှိလို့ ယုံကြည်စွာ စမ်းကြည့်ပါခြေစွယ်ငုတ်နေသူများ မနာမကျင်ပဲ ခြေသည်းဟာ တစ်ဖြေးဖြေး ပြန့်လာပြီး နောက်ထပ် ခြေစွယ်မငုတ်တော့မည့် နည်းလမ်းကောင်း.
ခြေစွယ်ငုတ်ခြင်းက ခံရခက်ပြီး ကုသလို့ အမြစ်မပြတ်ပဲ ပြန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့တွေဆို မျက်ရည်ကျသည်ထိ လှီးဖြတ်ပြစ်ကြပြီး ဆီချက်ပူ လောင်းထည့်တာမျိုးလည်း မြင်ဘူးပါတယ်။ နောက်တော့ ပြန်ဖြစ်တာပါပဲ။ ခု ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်နည်းလေးက မနာမကျင်ပဲ ခြေသည်းဟာ တစ်ဖြေးဖြေး ပြန့်လာပြီး နောက်ထပ် ခြေစွယ်မငုတ်တော့ပါဘူး။ ခြေသဲ လေးကလည်း နူးညံ့ချောမွတ်ပြီး လှပလာပါလိမ့်မယ်။ […]
လက်တွေ့နော် ဆား (၅၀ )သားလောက် ရေနွေးနဲ့ခြေထောက်ကို နာရီဝက်လောက် စိမ်ထားခြင်းရဲ့ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ
ရှယ်ပြီးသိမ်းထားသင့်တဲ့ဆေးနည်းလေးပါ ပြုလုပ်ရတာ လွယ်ကူပါတယ် မနေ့ညက လက်တွေ့စမ်းကြည့်တာ ဆား (၅၀ )သားလောက် ရေနွေးနဲ့ခြေထောက်ကို နာရီဝက်လောက်စိမ်ထားပြီး ခြေဖဝါးကို ဆားနဲ့ပွတ်တာ ပြီးတော့ပြောင်အောင်သဘက်နှင့်သုတ်လိုက်တယ် ဒူးအောက်ကနေ ရေနွေးလေးနဲ့ လောင်းပြီးဆေးလည်းရပါတယ် ကိုယ်မှာချွေးများထွက်လာပြီး ညောင်းတာကိုက်တာပေါ့သွားတယ် အပူလည်းတော်တော်ထွက်တယ် ဒီနည်းတိုင်း သုံးရက်လောက် လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ညောင်းတာကိုက်တာ အပူများတာ ကျန်တဲ့ရောဂါတစ်ချို့ […]